(တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
နေ (အင်္ဂလိပ်: Sun)သည် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် ရှိသော ကြယ် ဖြစ်သည်။ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဂြိုဟ်များသည် နေကို ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းများအတိုင်း လှည့်ပတ်၍ သွားနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေကို နေ့အခါတွင် ကောင်းကင်ယံတွင် မြင်နိုင်သည်။ နေသည် ကြီးမားသော အဝါရောင်ဘောလုံးကြီး တစ်ခုပမာပင်ဖြစ်သည်။
↑ Zombeck, Martin V. (1990). Handbook of Space Astronomy and Astrophysics 2nd edition. Cambridge University Press။
↑ Eclipse 99: Frequently Asked Questions။ NASA။ 24 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mamajek, E.E.; Prsa, A.; Torres, G.; et, al., IAU 2015 Resolution B3 on Recommended Nominal Conversion Constants for Selected Solar and Planetary Properties, arXiv:1510.07674 Check |arxiv= value (help)
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Report Of The IAU/IAG Working Group On Cartographic Coordinates And Rotational Elements Of The Planets And Satellites: 2000 (2000)။ 22 March 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Sun's Vital Statistics။ Stanford Solar Center။ 29 July 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Citing Eddy, J. (1979). A New Sun: The Solar Results From Skylab. NASA, 37. NASA SP-402။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နေ&oldid=498280" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၀၃:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။